समकालीन स्प्यानिश लेखकहरू, केही प्रतिनिधि कलमहरू वर्तमान साहित्य
समकालीन स्प्यानिश लेखकहरू अत्यन्त प्रशस्त भएकोमा विख्यात छन। हालका दशकहरूमा यस देशले धेरै प्रसिद्ध कलमहरूको जन्म देखेको छ जुन यसको साहित्यलाई समृद्ध बनाउँदैछ। तसर्थ, यी लेखकहरू सर्भेन्टेस, लोपे डे भेगा, लोर्का, क्युवेदो, बाक्वेर, पेरेज ग्यालडा, अन्य "नायकहरू" बीचमा छोडेको विरासतको योग्य उत्तराधिकारी मान्न सकिन्छ।
बिभिन्न विधाहरूको माध्यमबाट यी लेखकहरूले आफ्ना श्रोताहरूलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तन्त्रमन्त्र गरे। ती मध्ये कतिपयले करोडपति सम्पादकीय तथ्या .्कहरू पनि प्राप्त गरेका छन्, त्यस्तै कार्लोस रुइज जाफिन (१ 1964 2020-२०२०) र आर्टुरो पेरेज-रिभर्टेको अवस्था छ। त्यस्तै, यो Nacho Carretero वा फ्रांसिस्को Javier ओल्मेडो जस्ता प्रतिभाशाली युवाहरुको काम लाई ध्यान दिएर लायक छ। अर्को, यी लेखकहरूको अंशको साथ सूची।
1 आर्टुरो पेरेज-रिभर्टे
2 कार्लोस रुइज Zafon
3 नाचो Carretero
4 फर्नांडो अरम्बुरु
5 फ्रान्सिस्को जेभियर ओल्मेडो भास्कीज
नोभेम्बर २,, १ 25 1951१ मा स्पेनिश शहर कार्टाजेनाले आर्टुरो पेरेज-रिभर्टे गुटियरेजको जन्म देखी। उनले म्याड्रिडको कम्पुलेटन्स युनिभर्सिटीबाट पत्रकारितामा डिग्री हासिल गरे जुन उनले १ 1973 1994 देखि १ XNUMX XNUMX from सम्म अभ्यास गरे। त्यस्तै, उनका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कभरेज फाल्कल्याण्ड्स युद्ध, बोस्नियाको युद्ध र ट्युनिसियाको सत्ता हो।.
यद्यपि लेखकको रूपमा उनको पहिलो कार्य उपन्यास थियो हुसार (१ 1986 XNUMX), कामहरू जसले उहाँलाई वास्तवमै बदनाम दियो फ्लान्डर्स तालिका (1990) र डुमास क्लब (१ 1993 XNUMX)) तीन वर्ष पछि उनले प्रकाशित गरे ऐतिहासिक उपन्यास कप्तान एलाट्रिस्टे (1996)। यो शीर्षक यसले लाखौं प्रतिहरू बिक्रि गर्‍यो र--पुस्तक गाथामा पहिलो थियो।
२०० 2003 देखि, आर्टुरो पेरेज-रिभर्टे रोयल स्पेनिश एकेडेमीका सचित्र व्यक्तिको समूहसँग सम्बन्धित छ (आरएई), जहाँ उनले आर्मचेयर टी ओगटेको छ २०१ 2016 मा उनले "Zenda" किताबहरूको लागि वेबसाइट सिर्जना गरे र प्रस्तुत गरे फाल्को, सफल त्रयीको पहिलो किस्त पछि ईवा (२०१ 2017) र साबोट्याज (२०१)) को साथ पूरा भयो। २०२० मा उनको पछिल्ला कार्यहरू आइपुगे: फायर लाइन y चक्रवातको गुफा.
सेप्टेम्बर २,, १ 25 .1964, बार्सिलोनाको डेल पिलर क्लिनिकमा कार्लोस रुइज जाफानको जन्म भयो। उनको पहिलो अध्ययन कोलेजियो डे लस जेसुइटस डे सारियामा गरिएको थियो। सानै उमेरदेखि उनले लेखनप्रति रुचि देखाए; मैले डरलाग्दो र विदेशी विषयवस्तुहरूको बीच थोरै page-पृष्ठ कथाहरू सिर्जना गरें। १ 15 वर्षको उमेरमा उनले शीर्षकको पहिलो उपन्यास समाप्त गरे: Harlequin भूलभुलैया.
सूचना विज्ञान (बार्सिलोनाको स्वशासित विश्वविद्यालय) मा आफ्नो पहिलो वर्ष को दौडान, उनले विज्ञापनको क्षेत्र मा एक रोजगार प्रस्ताव प्राप्त भयो। उनले प्रख्यात कम्पनीहरूसँग काम गरे: ओल्लिवी, दयाक्स, टानडेम / DDB र म्याक क्यान विश्व समूह। को लागी धेरै विज्ञापन अभियानहरु को लागी वोक्सवैगनसमावेश सहित गल्फ र उनको नारा: "पहिले त्यहाँ पुग्नु महत्वपूर्ण छैन, तर कसैले यसलाई गर्नुपर्दछ"।
१ 1992 XNUMX २ मा रुईज जाफानले आफूलाई पूर्ण रूपमा साहित्यको लागि समर्पण गर्न विज्ञापन क्षेत्र छोडे। एक बर्ष पछि उनले आफ्नो पहिलो उपन्यास जारी गरे, धुंध को राजकुमार। यो शीर्षक यो एक राम्रो साहित्यिक पहिलो प्रतिनिधित्व गर्दछ, किनकि यो ईडेब पुरस्कारको विजेता थियो। यसबाहेक, उनको कथा संग जारी थियो रातको दरबार (1994) र सेप्टेम्बर को बत्तीहरू (1995) पूरा गर्न कुहिर त्रयी.
उनको सबैभन्दा उल्लेखनीय कार्य २००० मा देखा पर्‍यो, हावाको छाया। यस प्रकाशनको साथ, स्पेनिश लेखकले "सर्वश्रेष्ठ विक्रेता" को श्रेणी प्राप्त गरे, यसको १ करोड cop० लाख प्रतिहरू बिक्रि भएकोमा धन्यवाद। कार्लोस रुइज Zafon जुन १,, २०२० मा निधन भयो लस एन्जलस को शहर मा, संयुक्त राज्य अमेरिका, दुई बर्ष कोलन को क्यान्सर संग संघर्ष पछि।
१ 1981 XNUMX१ मा, स्पेनिश शहर ला कोरुनियाले नाचो क्यारेटेरो पउको जन्म देखे। उहाँ सानो छँदादेखि उहाँ आफ्नो हजुरआमाबाट लेख्न प्रेरित हुनुभयो। उनले टाई युनिभर्सिटी स्कूल अफ आर्टमा फिल्म पढेका थिए। पछि, आफ्नो पत्रकारिता क्यारियर रेडियो Coru Sa, Cadena SER मा शुरू भयो। समानान्तर रूपमा, उनले पत्रिकाहरूको लागि सम्पादकको रूपमा काम गरे जटडाउन, Xl साप्ताहिक, ओर्साई y के!, अरु माझ। साथै, उनी अखबारको एक हिस्सा थिए संसार.
आफ्नो पत्रकार जीवनमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावशाली रिपोर्टहरू बनाए। तीमध्ये रुवाण्डाको नरसंहार, अफ्रिकाको इबोला भाइरस, गलिसियामा लागुपदार्थको तस्करी र सिरियामा गृहयुद्ध रहेको छ। २०१ 2015 मा उनले आफ्नो पहिलो पुस्तक विमोचन गरे: फरिना, जुन छिटो बिक्रीमा आफैलाई नम्बर १को रूपमा स्थित गर्दछ। पछि काम एक टिभी श्रृंखलामा अनुकूलित भयो Netflix, जहाँ यसले ठूलो श्रोताको आनन्द उठायो।
Nacho Carretero को अर्को उल्लेखनीय कार्यहरू हो मृत्यु प row्क्तिमा (२०१ 2018), पाब्लो इबारको विवादास्पद केसमा आधारित। (एक वर्ष पछि Movistar Plus म समरूप श्रृंखला प्रसारण)। २०१ 2018 मा उनले प्रस्तुत गरे यो हामीलाई राम्रो देखिन्छ, Deportivo La Coruña फुटबल टीमको ईतिहासको बारेमा धेरै भावनात्मक पाठ। अन्तमा, २०१ in मा यो नाटक जारी गरिएको थियो फरिना, गलिसियाको सफल यात्राको साथ।
फर्नांडो अरम्बुरु इरिगोयिन १ 1959 XNUMX in मा बास्क कन्ट्रीको ग्वाइज्कोआ प्रान्तको राजधानी सान सेबास्टियन शहरमा जन्म भएको थियो। १ 1983 .XNUMX मा उनले जरागोजा विश्वविद्यालयबाट हिस्पैनिक फिलोलजीमा डिग्री हासिल गरे। युवावस्थामा उहाँ सीएलओसी समूहका संस्थापकहरूसँग सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो, जुन अनुभव उनले पहिलो उपन्यासमा प्रतिबिम्बित गरे। कागती संग आगो (१ 1996 XNUMX)), रामन गोमेज डे ला सर्ना पुरस्कार विजेता।
१ 1985 .XNUMX मा उनी जर्मनी सरेका थिए, जहाँ उनले सुरुमा आफूलाई आप्रवासीहरूका आफन्तहरूलाई स्पेनी भाषाको कक्षा सिकाउन समर्पित गरे। पछि, को पहिलो पुस्तक प्रस्तुत Antibula त्रयी, खाली आँखा (2000)। यो शीर्षक जारी राखिएको थियो यूटोपियाको तुरही (2003) र बामी कुनै छाया छैन (२०० 2005) २०० In मा उनले केवल साहित्यको सौदा गर्न शिक्षण छोडे।
आज, फर्नांडो अरम्बुरु एक प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, कवि, र निबन्धकार छन्।। उनका सबैभन्दा प्रसिद्ध पदहरू हुन् तीतो माछा (२००)) बहु र महत्वपूर्ण पहिचानको बीचमा RAE पुरस्कारका विजेता- र होमल्याण्ड (२०१ 2016) यो अन्तिम उपन्यास साहित्यको लागि राष्ट्रिय पुरस्कारको लागि योग्य थियो।
फ्रान्सिस्को जेभियर ओल्मेडो भास्कीज
कर्डोबा लेखक १ 1980 in० मा जन्म, हाल थ्रिलर र साइन्स फिक्शन विधामा मुख्य प्रतिनिधिहरू मध्ये एक हो। सानै उमेरदेखि उनले आफ्नो असाधारण कल्पना प्रदर्शन गरे, कहिले कालो अँध्यारो र अवास्तविक विषयवस्तुहरूको साथ। साहित्यमा रुचि भए पनि, १ 1998 XNUMX in मा उनले कम्प्युटर इन्जिनियरि Engineering पढ्ने निर्णय गरे, यसले यो थाहा पाइन कि यसले उसको जीवनलाई सँधै बदल्नेछ।
कक्षाको पहिलो हप्तादेखि उनी "भेटियो" (एक मित्र मार्फत) होवार्ड फिलिप्स लभक्राफ्ट, आतंकको सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शनकर्तामध्ये एक हो। अमेरिकी लेखकका कथावाचकहरूले ओलमेडोलाई बाल्यकालदेखि नै उनको कल्पनाशक्तिमा फसेका ती सबै विचारहरू प्रत्यक्ष गर्न मद्दत गरे। २०१ 2016 मा, उनले आफ्नो पहिलो पुस्तकमा "संरक्षक" लाई सम्मानित गरे, बिर्सिएको संसारको गवाहहरु.
ओल्मेडो भास्कीजका सबैभन्दा कुख्यात कार्यहरू हुन्: हाम्रो खुट्टा मुनि (2017) र हरामी (2019)। दुबै फोरोलिब्रो पुरस्कारका विजेताहरू थिए (२०१ respectively र २०२० संस्करणका क्रमशः उत्तम उपन्यास)। उसको सबैभन्दा भर्खरका पोष्टहरू हुन् धुंध को बच्चाहरु (2019) र चौथो प्रेरित (2020)।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » जीवनी » समकालीन स्प्यानिश लेखकहरू
राफेल लोपेज फ्लोरेस भन्यो
स्पेनमा, महिलाहरू, आजकल लेख्दिनन्? अभिवादन
राफेल लोपेज फ्लोर्सलाई जवाफ दिनुहोस्